Niue: Ny Lehiben'ny fizahan-tany an'ny firenena nosy iray hafa dia nilaza fa tsia amin'ny plastika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Niue: Ny Lehiben'ny fizahan-tany an'ny firenena nosy iray hafa dia nilaza fa tsia amin'ny plastika
Jolay 13, 2018
Niue Tourism chief executive Felicity Bollen thinks plastic and the visitor’s industry is a bad habit. Following the lead of Vanuatu Niue is banning plastic.
Ny filoham-pirenena Niue Tourism executive Felicity Bollen dia nilaza fa nanokana ny 12 volana ho avy ny firenena mba hialana amin'ny fahazarana amin'ny androm-piainany.
Ramatoa Bollen dia nilaza fa Niue dia nianatra tamin'ny zavatra niainan'i Vanuatu izay nampihatra ny fandrarana ny kitapo plastika, mololo ary boaty polystyrene tokana tamin'ny 1 Jolay.
Niue dia firenena nosy kely any amin'ny Ranomasimbe Pasifika atsimo. Fantatra amin'ny hantsam-bato vatosokay sy ny toerana fisitrihana amoron-dranomasina. Ny trozona mifindra monina dia milomano ao amin'ny ranon'i Niue eo anelanelan'ny Jolay sy Oktobra. Any atsimo atsinanana dia ny faritra iarovana ny ala Huvalu, izay misy ny lalan'ny ala haran-dranomasina namboarina nankany amin'ny totohondry Togo sy Vaikona. Ny avaratra andrefana dia misy ny ondram-bato ao amin'ny Cave Avaiki ary ireo Arava Talava voaforona voajanahary.
Nilaza ny talen'ny fizahan-tany Niue: “Vanuatu dia tsy maintsy nanitsy ny fandaharam-potoanany amin'ny fampidirana ilay fandrarana satria ny fe-potoana voalohany napetrany latsaky ny enim-bolana dia tery loatra.”
Nilaza Ramatoa Bollen fa iray taona dia hanome fotoana ampy an'i Niue hametrahana fiovan'ny kolontsaina.
“Ny fomba hanatanterahanay izany dia amin'ny alàlan'ny fanampian'ny governemanta Niue sy New Zealand.
“Tena hanome kitapo mpisolo toerana ho an'ny fianakaviana rehetra ao Niue izahay. Hanome azy ireo kitapo voajanahary azo ampiasaina indray isam-pianakaviana izahay. Mijery efatra isaky ny isan-tokantrano izahay, ”hoy izy.
Miaraka amin'i Vanuatu sy Niue, Papua New Guinea ary Samoa koa dia nanambara ny fikasana handràra kitapo plastika tokana ampiasaina.